I-Blackberry ingashiya umhlaba wama-mobiles noma abanye bathi | Izindaba zamagajethi
I-Blackberry ingashiya umhlaba wama-mobiles noma abanye bathi
Ezinyangeni ezedlule, ukunyamalala kweBlackberry emakethe yama-smartphone kuzwakale kakhulu, izindaba ezingathinta abaningi njenge I-Blackberry sekuyisikhathi eside ingumkhiqizo ohlobene nama-Smartphones. Kepha lokho wukuthi izibalo azibonisi imiphumela emihle futhi njengamanje zine-1% kuphela lemakethe engomahamba nendlwana.
Kungakho abaningi abanjengewebhu ye-Phone Arena bekhuluma ngayo IBlackberry ingahle ihoxe emakethe engomahamba nendlwana ngoSepthemba 28. Kodwa Ingabe into enjalo iyokwenzeka ngempela?
Ukwahlukaniswa kwezingxenyekazi zekhompiyutha kweBlackberry kubalelwa kuma-65% enkcitho yenkampani
Kuze kube manje sazi kuphela amahemuhemu nolwazi oluhamba kakhulu ngeziphetho kunamaqiniso. Njengamanje akukho lutho ngokuhoxiswa kweBlackberry nokuthi uma kunemibhalo ekhuluma ngayo ukwethulwa okuseduze kweselula okusha nge-Android. Konke okuphikisana ngokuphelele. Yize kufanele kuthiwe lezi zibalo zikhomba inhlekelele enkampanini.
Ngokusho kweMotley Fool, iBlackberry inezindleko ezinkulu esigabeni sayo sehadiwe, kuze kube sezingeni lokuthi imele ama-65% esamba semali esetshenziswa yi-Blackberry ngenkathi inkampani namaselula ayo bane-1% kuphela yemakethe yonke. Ukuhlukaniswa kwesoftware ngokwayo kudala izimali ezinkulu, kepha umphathi weNkampani usexwayisile ukuthi uzolivala iqembu lezingxenyekazi zekhompuyutha uma linikeza ukulahleka, yingakho amahemuhemu.
Kuyacaca ukuthi izinsuku zeBlackberry njengomkhiqizo omkhulu emhlabeni weselula seziphelile, kepha uma ukuhlukaniswa kwesoftware kusebenza ngempela, ngiyangabaza kakhulu uKen no bonke abanye abaphathi benkampani bavale lesi sigabaYize kuzoba nezinguquko, angingabazi. Futhi lezo zinguquko zingaqala ngokunyamalala kwekhibhodi, into ezokwenzeka ku-Blackberry DTEK60 elandelayo, kepha Ngabe lusazoba khona olunye ushintsho? Ngabe ucabanga ukuthi iBlackberry izovala ukuvalwa kwayo kwehardware? Ungayithenga yini iselula yeBlackberry namuhla?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-Blackberry ingashiya umhlaba wama-mobiles noma abanye bathi
Kwitrayer entsha uXiaomi uqinisekisa amakhamera amabili angemuva eMi 5S
ILeEco Le Pro 3, elinye izinga eliphezulu ngentengo yokuhleka